कसरी एप्पल बाट एक प्रतिस्थापन प्लग एडाप्टर अर्डर गर्ने आईफोन समाचार
एप्पलबाट प्लग एडाप्टर प्रतिस्थापन कसरी अर्डर गर्ने
केही दिन अघि हामीले तपाईंलाई यो भनेका थियौं कि कसरी एप्पलले युरोपमा यसको केही उत्पादन चार्जरहरूको लागि प्लग एडाप्टर प्रतिस्थापन कार्यक्रम सुरू गरेको थियो। यस्तो देखिन्छ कि कम्पनीले आफैंले प्रदान गरेको जानकारी अनुसार यो एडीप्टरहरू मध्ये केही खराबी हो र ब्रेक गरेर दुर्घटना हुन सक्छ जब तिनीहरूलाई प्लगबाट हटाईन्छ। यद्यपि यो घटना भएको अवस्थामा केहि केसहरू पत्ता लागेका छन्, एप्पलले उनीहरूको घाटा घटाउने र सबै संदिग्धहरूलाई बदल्ने निर्णय गरे। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँको उत्पादन दोष छ कि छैन भने? तपाइँलाई थाहा छैन कसरी नयाँ विफलता बिना नयाँको लागि भाग प्रतिस्थापन अनुरोध गर्ने? ठिक छ, हामी तल सबै कुरा वर्णन गर्दछौं।
1 चार्जरहरू प्रभावित छैनन्, केवल एडाप्टर
2 कसरी जान्ने यदि मसँग एक प्रभावित उत्पाद छ
चार्जरहरू प्रभावित छैनन्, केवल एडाप्टर
तपाइँले केहि साइटहरूमा फेला पार्न सक्नुहुने जानकारी केही हदसम्म भ्रामक छ। यो चार्जरहरू आफैंमा प्रभावित छैनन्, तर प्लग एडाप्टर। त्यो टुक्रा जुन हेडर फोटोमा देखा पर्दछ र त्यो दुबै म्याकबुक चार्जर र आईप्याड चार्जरको लागि काम गर्दछ। केवल त्यो भाग बिग्रिएको एक हो र त्यसैले केवल त्यो अंश मात्र प्रतिस्थापन हुनेछ।
कसरी जान्ने यदि मसँग एक प्रभावित उत्पाद छ
यो एकदम सरल छ, हामीलाई केवल उत्पादनको सिरियल नम्बर मात्र चाहिन्छ (यात्रा किट, म्याकबुक, आईप्याड वा चार्जर) जुन हामी उत्पादनमा पाउन सक्छौं। ओएस एक्स मा हामी Mac > यस म्याकको बारेमा »मा जान सक्दछौं र यो छविमा हामीलाई देखा पर्नेछ जुन तपाईं यी रेखाहरू भन्दा माथि देख्न सक्नुहुनेछ (छविमा पिक्सेलित)। आईप्याडमा हामी "सेटि >हरू> सामान्य> सूचना" मा जान सक्दछौं र हामी नम्बर देख्न सक्छौं।
एकचोटि हामीसँग यो भएपछि, क्लिक गर्नुहोस् यो लिङ्क प्रतिस्थापन कार्यक्रमको आधिकारिक एप्पल पृष्ठमा जानको लागि, हामी हाम्रो देश छनौट गर्छौं र बक्समा सिरियल नम्बर घुसाउँदछ जुन देखिन्छ। हामीले त्यसपछि एप्पल खातामा हाम्रो पहुँच डाटा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र यदि हामी प्रभावित छौं वा छैनौं भने त्यो हामी समक्ष देखा पर्नेछ। यदि हो भने, हामीले शिपिंग जानकारी भर्नु पर्छ ताकि प्रतिस्थापन भाग आउँनेछ र हामी समाप्त हुनेछौं। यो केवल यसलाई प्राप्त गर्नको लागि प्रतीक्षा गर्न बाँकी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईप्याड » एप्पलबाट प्लग एडाप्टर प्रतिस्थापन कसरी अर्डर गर्ने
म असहमत । मसँग आईफोन have छ, जसमा त्यो एडेप्टर छैन, र यो जे भए पनि प्रभावित हुन्छ। पत्रिका एक टुक्रा हो, र उही प्रभाव छ। त्यसैले जानकारी गलत छ
Xavidan लाई जवाफ दिनुहोस्
यो एप्पलको आफ्नै पृष्ठमा गलत हुनेछ, जसले यसलाई एकदम स्पष्ट बनाउँदछ:
"नोट: यस कार्यक्रमले अन्य प्लग एडाप्टरहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत, चीन र जापान, वा एप्पल युएसबी पावर एडेप्टरलाई असर गर्दैन।"
तपाईं यसलाई € for मा पनि किन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई केबलम्याकमा तपाईंको चार्जरको लागि एडेप्टर चाहिन्छ भने। http://cablesmac.es/ac-adaptador-cargador-magsafe-plug-18.html
विकासकर्ताले देखाउँदछ कि एप्पल टिभी on मा पिक्चर-इन-पिक्चर कस्तो देखिन्छ